Ogaden News Agency (ONA) – Saraakiil JWXO Katirsan oo Shirar Waawayn Kuqabtay Garbo iyo Dhagaxmadow.
Saraakiil JWXO Katirsan oo Shirar Waawayn Kuqabtay Garbo iyo Dhagaxmadow.
Waxaa gudaha wadanka Ogadenia todobaadadan kasocday shirar waawayn oo ay qabanayaan saraakiil katirsan Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO, shirarkaas oo looqabanayo shacabka Soomaaliyeed ee Ogadenia kudhaqan oo inbadan kusoo jiray afduub dhinaca rabitaankooda ah.
Saraakiil isugu jira qurba-joog iyo saraakiishii ciidanka JWXO ee gudaha katirsan, waxayna abaabul balaadhan kawadaan guud ahaan dhulka Ogadenia, waxayna shirar waawayn uqabteen shacab aad utiro badan oo u oomanaa aragtida xunbaha JWXO iyo CWXO.
Saraakiisha JWXO ee gudaha kusugan ayaa shirar aan laqiyaasi karin maalmihii lasoo dhaafay kuqabtay Dagmooyinka Garbo iyo Dhagaxmadow, waxayna shacabka labada Dagmo aad usoo dhaweeyeen kulamada looqabtay iyagoo wajiyadooda ay farxadi buuxisay.
Saraakiisha JWXO ee gaadhay Garbo iyo Dhagaxmadow ayaa shacabkii ay halkaas ugu tageen uga xog waramay xaalada dhabta ah ee maanda lagu sugan yahay, waxayna intaas raaciyeen in maanta loobaahan yahay midnimo iyo in la iska iloobo dhamaan wixii lasoo maray, taas oo hadii laxasuusnaado lagu noqon doono meeshii laga yimid.
Saraakiisha JWXO ee gudaha ayaa shacabka ay dhibaatooyinku daashadeen ee Soomaalida Ogadenia usheegaya in maanta lamuujiyo midnimo si loogaadho hadafkeenii boqolaalka sano soosocday ee rabitaanka shacabka kusalaysnaa.
Saraakiisha JWXO ee gudaha ayaa lagu soo dhaweeyay deegaano aad ubadan halkaas oo ay shirar waawayn kuqabteen, waxaana meelahaas kamid ahaa Gunagado, Bulaale, Fiiq, Sagag, ShaygoosH, Galadiid, Nusdariiq, Marsin, Wardheer, Caleen, Hadhaawe, Goday, Dhoobawayn iyo waliba deegaano kale oo aad ubadan oo aan lasoo koobi karin.
Shacabka Soomaalda Ogaadeeniya ayaa si kal iyo laab ah usoo dhaweeyay saraakiisha JWXO ee dhuka saqaafaysa, waxayna kusoo dhawaynayaan caleemo qoyan iyo calanka JWXO, oo mudo dheer laqarin jiray.
Dhinaca kale waftigii JWXO ee uu horkacayay Mudane Xuseen Maxamed Nuur ayaa kulamo waawayn uqabtay shacabka Soomaaliyeed ee kusugan Dirdhabe, waxayna sidoo kale lakulmeen siyaasiyiin iyo dhalinta barbaarta Gobolka Siti iyo waliba Ugaaska guud ee beesha Ciise.
Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa kudaha iyo dibadaba kabilowday dadaalo balaadhan oo lagu midaynayo shacabka Soomaaliyeed ee Ogadenia kudhaqan looguna diyaar garoobayo isbadalka guud ee geeska Africa kadhacaya iyo waliba xiliga kala guurka ah ee Itoobiya.